Fahasimbana | May 2022
Tena > Fahasimbana
Diet fianjerana 2 herinandro
Diet fianjerana 2 herinandro - ny fomba fikirakirana
Ahoana no ahafahako mampihena ny lanjako mandritra ny 2 herinandro? Eto, ireo matihanina momba ny fahasalamana dia mizara ny torohevitr'izy ireo tsara indrindra momba ny fampihenana lanja ao anatin'ny tapa-bolana. Tsy mila tsakitsaky anelanelan'ny sakafo ianao. Maka HIIT. Aza mihinana siramamy intsony. Miasa farafahakeliny 30 minitra isan'andro. Misotroa rano 64 grama. Makà torimaso ampy. Misafidiana sakafo manontolo. Mihinàna tavy mahasalama.
formula 1 fianjerana alonso
Fihetseham-po amin'ny formule 1 alonso - ahoana no hamahanao
Inona no nitranga tamin'ny lozam-pifamoivoizana tany Alonso? Efatra andro monja taorian'ny lozam-pifamoivoizana am-bisikileta nahatonga ny mpamily Alpine F1 Fernando Alonso tany amin'ny hopitaly, dia navotsotra ilay Espaniôla hanohy ny fahasitranana ao an-trano, hoy ny ekipany. Nambara taty aoriana fa nodidiana izy noho ny fivakisan'ny valanoranony, ary avy eo nijanona tao amin'ny hopitaly izy mba hojerena.
fianjeran'ny hazakazaka bisikileta vehivavy
Fianjerana amin'ny hazakazaka bisikileta ho an'ny vehivavy - ny fomba fanapahana hevitra
Hitan'izy ireo ve ilay vehivavy nahatonga ny fianjerana Tour de France? Rehefa avy nanao antso vonjy ny vavolombelona dia fantatra ilay olona, ​​hita, ary efa eo am-pelatanan'ny polisy ao Landerneau, araka ny filazan'ny RTL. Raha ny filazan'i Reuters dia nitodika tany aminy izy. Ilay vehivavy frantsay 30 taona dia voarohirohy ho nandratra tsy nahy ary niatrika lamandy 1.500 euro.30. 2021.
fianjerana alphilippe julian
Fianjeran'i alphilippe Julian - ny fomba hamahana izany
Inona no nitranga Julian Alaphillipe? Julian Alaphilippe dia nandao ny Tour de Suisse hiverina any an-trano noho ny nahaterahan'ny zanany voalohany niaraka tamin'i Marion Rousse, mpanadihady amin'ny fahitalavitra teo aloha, hoy ny ekipan'i Deceuninck-QuickStep. 12. 2021.
Fianjerana haingana - ahoana no hamahana
Ahoana no hataoko any Swift? Andramo izany, tsindrio play_arrow Build ary ampandehano ny teti-dratsy ankehitriny ao amin'ny Xcode hananganana ny app anao amin'ny fitaovana na simulator. Sokafy indray ny fampiharana anao amin'ny simulator na fitaovana. Ampidino ilay Crash mba hianjera amin'ny rindrambaiko.
sary niharam-boina tamin'ny concorde
Sarin'ireo niharan-doza nianjeran'i Concorde - ny fomba fanamboarana
Iza no maty lasibatry ny fianjeran'i Concorde? Ny ampahany tamin'ny Concorde dia nianjera niampita niampita tany amin'ny faritry ny hotely, namono ireo mpianatra poloney roa, Eva Lipinska sy Paulina Sypko, ary ny mpikarakara tokantrano Kenza Rachid sy Devranee Chundunsing.
fianjerana fiara bisikileta
Fiatoana bisikileta - vahaolana mifantoka amin'ny hetsika
Inona no mitranga rehefa bisikileta no mamely fiara? Ny lozam-pifamoivoizana amin'ny bisikileta dia mety hanimba fahasimbana ny asan'ny lokon'ny fiaranao, ary koa ny fahasimbana amin'ny vatana noho ny famatorana ao amin'ny vatan'ny fiara. Matetika dia mihoatra lavitra noho ny vidin'ny paosin-bisikileta eo am-paosy matetika ny fahavoazana. Ny fiantohana fiara bisikileta dia tsy hanarona ny simba amin'ny fiaranao.
nianjera i geraint thomas
Fianjeran'i Geraint thomas - vahaolana mifantoka amin'ny hetsika
Inona no nahatonga an'i Geraint Thomas nianjera? Tsy naharesy ny fandreseny voalohany i Geraint Thomas tao anatin'ny telo taona teo ho eo rehefa nilatsaka izy ary nianjera niaraka tamin'ny 50 metatra sisa tavela tao amin'ny Dingana 4 an'ny Tour de Romandie. Nilaza i Thomas fa ny fiovan'ny fitaovana afovoany dia nahatonga azy nianjera.2 2021.
Lozam-pifamoivoizana amin'ny bisikileta - mitady vahaolana
Inona no hataoko raha nianjera tamin'ny bisikiletako aho? Raha sendra toe-javatra mety hampidi-doza ianao dia miantso ny 911. Mitadiava faritra azo antoka. Aza matahotra. Zahao ny vatanao. Zahao ny lohanao. Fiatrehana bisikileta. Zahao ny bisikiletanao. Vantany vao milamina ianao ao an-trano. Makà fotoana hanasitranana.